पर्खन्छन त निधीले देउवाको ‘ग्रिन सिग्नल’ ? « Bikas Times
पर्खन्छन त निधीले देउवाको ‘ग्रिन सिग्नल’ ?
- विकास विशेष संवाददाता-
कांग्रेस पार्टीमा चौधौ महाधिवेशनको बढ्दो रापसँगै सभापतिको उम्मेदवारीको सन्दर्भले पनि सबैको ध्यान तानिएको अनुभव गरिएको छ । विगतमा मधेश कांग्रेसको आधार क्षेत्र रहि आएको विदीतै छ । कांग्रेसको नेतृत्व तहमा पुग्ने आकांक्षीका लागि मधेश एकपटक पुनः आवश्यकता बनेको छ भनियो भने त्यो अनुचित हुने छैन ।
कांग्रेस अहिले सभापति शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन समूह, पूरानो संस्थापन समूह, (जो हाल पौडेल समूहका नामले चर्चित छ) र पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौलाको समूह गरी तीन समूहमा विभक्त छ । विगतको तेह्रौं महाधिवेशनकै समयमा स्थापित यी तीन समूह हालसम्म पनि कांग्रेसमा क्रियाशील छन् । चौंधौ महाधिवेशनको समय नजिकिँदै जाँदा माथि उल्लेख गरिएका समूहबाहेक अन्य समूहको पनि उदय हुन सक्ने वा हालका समूहहरुको पुनर्संरचना हुन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । हाल सभापतिको उम्मेदवारका रुपमा चर्चामा रहेकाहरुका कारण पनि कांगे्रसभित्रको गुटगत संरचनामा परिवर्तन आउन सक्ने सम्भावना बढेको हो ।
आगामी महाधिवेशनका सन्दर्भमा माथि चर्चा गरिएको ‘मधेश फ्याक्टर’ले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । कांग्रेसको करिव सात दशकभन्दा लामो इतिहासमा कांग्रेसको मूल जनाधार क्षेत्र मधेशका कोही पनि यसको शीर्ष नेतृत्वमा पुग्न सकेका छैनन् । किन ? पुग्न सकेनन् वा पुग्न दिइएन वा पुर्इयाएन ? महाधिवेशनमा मधेशबाट सहभागी हुने प्रतिनिधिबीच अहिले यो प्रश्न चर्चाको विषय बनेको छ । पार्टी सम्बद्ध स्रोतका अनुसार प्रदेश दुई, जो मूल मधेशका रुपमा चर्चित छ, बाट करिव एक हजार पाँच सय प्रतिनिधि महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछन् । सप्तरीका एक प्रभावशाली कांग्रेस नेताका अनुसार, मधेशमा पार्टी सभापतिका लागि योग्य र क्षमतावान व्यक्ति हुँदै नभएका होइनन् तर विगतमा तिनले उचित अवसर पाउन सकेनन् । उनी भन्छन्, यसपटक भने हामी मधेशबाट सभापतिका लागि हाम्रो उम्मेदवार दिने पक्षमा छौं ।
सप्तरीका ती नेताको कथन त्यतिकै आएको होइन । यसको पृष्ठभूमी तैयार भइसकेको छ । आगामी महाधिवेशनका सन्दर्भमा अनेक नेताको नाम चर्चामा आएसँगै एक नाम विशेषरुपले चर्चामा छ । उक्त नाम हो पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधीको । निधीको नाम चर्चामा आएसँगै सप्तरीका ती नेतालगायत अन्य थुप्रै हौसिएका छन् । ती नेताका अनुसार, हाल उनी देउवा समूहमा आवद्ध छैनन् तर भोली निधीले खुट्टा दरोसँग टेकेछन् र आफ्नो छुट्टै गुट निर्माणको आवश्यकता बोध गरेछन् भने उनीजस्ता अनेकौं नेता र कार्यकर्ता निधीको गुटमा समाहित हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
त्यसो त निधी स्वयंले आफ्नो उम्मेदवारीका सन्दर्भमा स्पष्ट ढंगले कुरा राख्दै आएका छन् । पछिल्ला दिनमा आफू उपस्थित हुने भौतिक वा भर्चुवल बैठकहरुमा निधीले आफ्नो उम्मेदवारीको कुरा प्रष््टयाउँदै आएका छन् । यतिमात्र होइन निधीको सचिवालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार हाल निधीले औपचारिक वा अनौपचारिक तवरले विभिन्न स्तरमा विभिन्न समूहसँगको भेटलाई तीव्रता प्रदान गरेका छन् र ती भेटघाटमा सभापतिका लागि आफ्नो उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टिको प्रयास गरेका छन् । निधी निकट एक स्रोतका अनुसार, शायद यही कारण हो उनले हाल आफ्नो सचिवालयलाई पनि वलियो बनाउने र त्यसमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुलाई जोड्ने प्रयत्न गरेका छन् । यतिमात्र होइन आफ्नो नेतृत्वमा रहेको पार्टीको नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई पनि आफूलाई अनुकूल हुने गरी प्रयोग गर्ने रणनीति निधीले बनाएको कुरा प्रतिष्ठानका एक सदस्यले बताए । उनले भने, ढुक्क हुनुस, उहाँको उम्मेदवारी कायम रहन्छ । उहाँ यसका लागि सबै ढंगले तयारी गरिरहनुभएको छ ।
वास्तवमा पार्टीको सभापति बन्ने कुरा निधीको व्यक्तिगत स्वार्थसँग जति जोडिएको छ, त्यतिकै समग्र मधेशको प्रतिष्ठासँग पनि जोडिएको कुरा सम्बद्ध सरोका।वालहरु बताउँछन् । कांग्रेस र मधेशको विगत कोट्याउँदा थुप्रै व्यक्तिको नाम लिन सकिन्छ जो नेतृत्वका लागि योग्य रहँदारहँदै पनि तिनले समुचित अवसर पाउन सकेनन् । यसमध्येका एक स्वयं विमलेन्द्रका पिता गान्धीवादी नेता महेन्द्रनारायण निधी पनि हुन् । पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीका लागि चर्चामा रहँदारहँदै पनि पिता निधीलाई उक्त अवसरबाट वञ्चित गरियो । विमलेन्द्रमा कतै न कतै त्यस कुराको रोष पनि छ र एकपटक पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री बनेर पिताले देखेको सपना पूरा गर्न चाहन्छन् भन्नेहरुको कमी छैन ।
उनी निकट जनकपुरका एक स्थानीय नेता भन्छन्, निधीको पार्टी सभापति बन्ने रणनीति नयाँ होइन, निकै पूरानो हो र यसका लागि उनी धेरै पहिलेदेखि योजना बनाइहेका छन् । ती नेताका अनुसार आफ्नो गुट नबनाई निधीले देउवा गुटमै संलग्न भएर शक्ति आर्जन गर्ने रणनीतिलाई कार्यरुप दिंदै आएका हुन् । जनकपुरका ती नेता अझै स्पष्ट गर्दै भन्छन्, निधीसँग अन्य गुटमा आवद्ध हुने अवसर पनि थियो तर उनी देउवा समूहमा आबद्ध हुँदा सार्वकालिक दोस्रो नेताका रुपमा स्थापित भइरहने अवसर भएकैले उनले गुट त्याग गर्नुको साटो देउवा समूहलाई वलियो बनाउन सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । यसो गर्दा देउवापछि आफूू नै उक्त गुटको नेता हुने र यो अवस्था आफू सभापति बन्न सहयोगी हुने विश्वास निधीको हो ।
सम्भवतः यसै आधारमा १२ र १३ औं महाधिवेशनमा निधीले देउवालाई निःशर्त सभापतिमा स्वीकार गरी सहयोग गरेका हुन् । निधीले १४औं महधिवेशनमा देउवा उम्मेदवार नहुने र गुटको उम्मेदवारका रुपमा देउवाले आफूलाई समर्थन र सहयोग गर्ने विश्वास गर्नु अनपेक्षित होइन । तर हालसम्मको अवस्थामा त्यसो हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन र देउवा स्वयं एकपटक पुनः सभापतिका लागि इच्छुुक देखिएको सूत्रहरु बताउँछन् ।
त्यसो त निधीले आफू सभापतिको उम्मेदवार बन्न चाहेको देउवालाई जानकारी दिइसकेको बताइन्छ तर देउवाले हालसम्म निधीको प्रस्तावमा ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएका छैनन् । यस्तोमा निधी सभापतिका उम्मेदवार त बन्लान र बन्नु पनि पर्छ तर उनी देउवा गुटको उम्मेदवार बन्ने वा आफ्नै ‘स्वतन्त्र हैसियत’मा उम्मेदवार बन्ने भन्ने कुराको टुंगो लाग्न केही समयको प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ ।